मिशेल Houellebecq एक जन्मदिन छ। उनको काम को कविता | वर्तमान साहित्य
मिशेल Houellebecq। फोटोग्राफी: EFE Andreu Dalmau
मिशेल Houellebecq आजको जस्तो आजको दिनमा जन्मेको थियो 1958 रियुनियन टापुमा। लेखक, निबन्धकार र कवि, उपन्यासका लेखक हुन् जसले उनलाई विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया स्टार बनाएका छन्। तर यो पनि एउटा हो अधिक बलवान र ट्रांसग्रेसिव समकालीन कथाहरू। र कवि। आज म चयन गर्छु Poems कविताहरू उनको लिरिकल काम।
उहाँ माइकल थॉमस को नाम संग जन्म भएको थियो, तर को छद्म नाम अपनायो मिशेल Houellebecq उनको हजुरआमा, जो उसलाई हुर्काएको थियो।
यसले २००१ मा सफलता हासिल गर्‍यो, जसरी उत्तिकै प्रशसित अस्वीकार गरियो प्लेटफर्म। र पछि, संग नक्शा र क्षेत्र, जीत पछि ठूलो असर पारेको छ Goncourt पुरस्कार। तर उनको सबैभन्दा ठूलो विवाद संग गए सबमिशन, जहाँ यसले भविष्यको इस्लामी फ्रान्स खडा गर्दछ।
Su कविता अनुसरण गर्नुहोस् उही लाइन उनको कथनको र समकालीन साहित्यका केही वास्तविक कट्टरपन्थी लेखकहरूको एक व्यक्तित्वको पूर्णता।
उसको काममा कविता (Anagrama द्वारा प्रकाशित) शैली को चार पुस्तकहरु संगै ल्याउँछ -बाँच्नुहोस्, संघर्षको भावना, खुशीको खोजी y Renacimiento- र यो द्विभाषी संस्करणमा छ। वैकल्पिक नि: शुल्क पद, सबै भन्दा विविध थिमहरूको साथ क्लासिक र काव्य गद्य।
कवितामा यो केवल चरित्रहरू मात्र बाँचेका हुँदैनन्।
मेरो शरीर रातो धागोले बिछ्याइएको बोरा जस्तै छ
कोठा अँध्यारो छ, मेरा आँखाहरू राम्ररी चम्किरहेका छन्
म उठ्न डराउँछु, म भित्र महसुस गर्छु
केहि नरम, दुष्ट, त्यो सारिन्छ।
मैले यो मासुलाई वर्षौंसम्म घृणा गरें
यसले मेरा हड्डीहरूलाई ढाक्छ। Adipose सतह को,
पीडाको लागि संवेदनशील, थोरै स्पन्जी;
थोरै तल्लो, एक अंग कडा हुन्छ।
हे येशू ख्रीष्ट, म तपाईलाई घृणा गर्दछु किनभने मलाई एउटा शरीर दिएको छ
साथीहरू अदृश्य हुन्छन्, सबै चीजहरू छोडिन्छन्, छिटो,
बर्ष बितेर जान्छ, ती टाढा भाग्छन्, र केहि पुनरुत्थान हुँदैन,
म बाँच्न चाहन्न र मृत्युले मलाई डराउँछ
अस्थिरतामा, अप्रभावनीय मौन,
म त्यहाँ छु। म एक्लै छु। यदि तिनीहरूले मलाई हिर्काए भने, म सर्छु।
म रातो र रगत बगेको चीजको रक्षा गर्न खोज्छु
संसार एक सटीक र माफिला .्ग अराजकता हो।
त्यहाँ वरपरका मानिसहरू छन्, म उनीहरूलाई सास फेर्दै गरेको सुन्छु
र यसको मेकानिकल चरणहरू ट्रेलीमा मिल्छ।
यद्यपि मैले पीडा र क्रोध महसुस गरें;
मेरो नजिक, धेरै नजिक, एक अन्धा मानिस लामो सास छ।
म लामो समय सम्म बाँचेको छु। त्यो हास्यास्पद छ।
मलाई आशाको समय राम्ररी याद छ
र मलाई मेरो बाल्यकालको पनि याद छ
तर मलाई लाग्छ यो मेरो अन्तिम भूमिका हो।
तिमीलाई थाहा छ? मैले पहिलो सेकेन्डदेखि स्पष्ट देखेको थिएँ,
यो एक चिसो थियो र म डर संग पसीना थियो
पुल भाँचिएको थियो, सात बज्यो
क्र्याक त्यहाँ थियो, मौन र गहिरो।
कुनै चीजको जीवन छैन
मैले जन्मको लगत्तै बुढो महसुस गरें;
अरूहरू लडे, इच्छित थिए, र sighed;
ममा मैले एउटा अस्पष्ट चाहना बाहेक केही महसुस गरेन।
मसँग बचपन जस्तो केहि कहिल्यै थिएन।
केहि ज fore्गलको गहिराईमा, काईको कार्पेटमा,
घिनलाग्दो रूखका सun्ख्याहरू यसको पातहरू हुन्छन्;
तिनीहरूका वरिपरि शोकका वातावरणहरू छन्;
फung्गी उसको कालो र फोहर छालामा फस्छ।
मैले कहिले पनि कसैको सेवा गरेको छैन।
दया तपाई नराम्रोसँग बस्नुहुन्छ जब यो आफ्नै लागि हुन्छ।
हल्का आन्दोलन एक समस्या हो,
तपाईं दयनीय र अझै महत्त्वपूर्ण महसुस गर्नुहुन्छ।
तपाईं सानो बग जस्तै अस्पष्ट रूपमा सार्नुहुन्छ।
तपाई अब सायद कुनै चीज हुनुहुन्छ, तर तपाईसँग कस्तो नराम्रो समय छ!
तपाईं संग एक प्रकारको अगाध खाडल
मीन र पोर्टेबल, अलि हास्यास्पद।
तपाईं मृत्युलाई घातक कुराको रूपमा हेर्न रोकिनुहुन्छ;
समय समयमा तपाईं हाँस्नुहुन्छ; विशेष गरी सुरुमा;
तपाईं अवहेलना अपनाउन व्यर्थ प्रयास गर्नुहोस्।
त्यसोभए तपाईं सबै कुरा स्वीकार्नुहुन्छ, र मृत्युले बाँकी काम गर्दछ।
त्यहाँ सँधै कविहरु को लागी एक सहर छ
कि यसको पर्खाल बीच तिनीहरूले आफ्नो गन्तव्य पार गर्यो
सबै ठाउँमा पानी, मेमोरी गनगन
व्यक्तिको नाम, शहरहरूको नाम, बिर्सिनेहरू।
र उही पुरानो कहानी सधैं फेरि सुरु हुन्छ,
पूर्ववत क्षितिज र मसाज कोठा
मानिएको एकान्त, आदरपूर्ण छिमेक,
यद्यपि त्यहाँ मानिसहरु छन् जो अवस्थित छन् र नाचिरहेका छन्।
तिनीहरू अर्का प्रजातिका मानिस हुन्, अर्को जातिका मानिस,
हामीले नृत्यलाई क्रूर नृत्यको अवसर प्रदान गरे
र केही साथीहरूसँग हामी स्वर्गको स्वामित्वमा छौं,
र खाली ठाउँहरूको लागि अनन्त अनुरोध;
समय, पुरानो समय, यसले यसको बदला लिने योजना बनायो,
जीवनको अनिश्चित अफवाह जुन बित्यो
हावाको हिसक, पानीको चुहावट
र पहेंलो कोठा जसमा मृत्यु अगाडि बढ्छ।
त्यो होइन ...
त्यो होईन। म मेरो शरीरलाई राम्रो अवस्थामा राख्ने प्रयास गर्दछु। हुन सक्छ ऊ मरिसकेको छ, मलाई थाहा छैन। त्यहाँ केहि गरिनु पर्छ जुन म नगर्दिन। तिनीहरूले मलाई सिकाएनन्। यस वर्ष मैले धेरै उमेर पुगेको छु। मैले आठ हजार सिगरेट खाएको छु। मेरो टाउकोले प्रायः चोट पुर्‍याएको छ। यद्यपि बाँच्नको लागि एक तरिका हुनुपर्दछ; किताबमा नभएको कुरा। त्यहाँ मानिसहरु छन्, चरित्रहरु छन्; तर एक बर्ष देखि अर्को बर्ष म कठिनले अनुहार चिन्न सक्छु।
म त्यस मान्छेलाई सम्मान गर्दैनु। जे होस्, म उसलाई ईर्ष्यालु।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » मिशेल Houellebecq एक जन्मदिन छ।5उनको काम को कविता
जुआन डेल वैलका किताबहरू